Indlela yokwenza imali ekhaya: amabhizinisi ongaba nawo | Ezezimali Zomnotho
Encarni Arcoya | 21/05/2021 08:27 | Umnotho jikelele
Baningi abantu abashiywe bengenamsebenzi, kanti abanye abambalwa ababone ukuthi umholo wabo wehlisiwe, kwesinye isikhathi namahora abo okusebenza. Ngakho-ke, kulabo abafuna ukuthola imali ekhaya, kufanele bazi ukuthi kunezinketho zokuyithola. Uyazi kanjani?
Okulandelayo sifuna ukukusiza, uma ukulo lolo cwaningo, ukuze wazi Uyithola kanjani imali ekhaya, kusuka kokulula ukuya kulawo mabhizinisi avele ngenxa yokushoda komsebenzi, noma alethe ubuchwepheshe obusha.
1 Uyithola kanjani imali ekhaya bese uyihlanganisa nomunye umsebenzi
1.1 Yiba umhleli online
1.2 Umsizi we-Virtual
1.3 Umxhumanisi webhizinisi
1.4 Thengisa izifundo noma ube nomthelela
1.5 Uyenza kanjani imali ekhaya: Isitolo sakho esiku-inthanethi
1.6 Umthwebuli zithombe
1.7 Uyenza kanjani imali ekhaya: Uthisha obonakalayo
Uyithola kanjani imali ekhaya bese uyihlanganisa nomunye umsebenzi
Izimo ongazithola ukuzo zidlula ezibili: kungaba awunawo umsebenzi futhi uzama ukuthola okuthile okungakwenza ukhokhe izikweletu futhi uphile impilo ejwayelekile (noma okungenani uzame, ikakhulukazi uma unomndeni amacala). Okunye ukuthi unomsebenzi kodwa lokhu kwehlisiwe emholweni noma ukuthi akwanele ukubhekana nezikweletu onazo.
Noma ngabe ikuphi isimo sakho, kunezindlela zokuthola imali ekhaya. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi lokhu kungaba yini? Inhloso:
Yiba umhleli online
Uma ubhala kahle, futhi usazi kahle isihloko, enye yezindlela zokuthola imali ekhaya yile, ngegama. Futhi ungakwenza ube umbhali noma umbhali online. Vele, khumbula ukuthi kunabantu abaningi abazinikele kulokhu, iningi lesikhathi esigcwele, njengama-freelancers, futhi iqiniso ukuthi, uma ulungile, ungathola imali eningi.
Kulokhu, ungumphathi wakho, usebenza amahora owafunayo futhi inqobo nje uma uhlangabezana nesikhathi esinqunyiwe, akufanele ube nenkinga. Manje, ukuthola umsebenzi okhokhelwa kahle akulula, ngakho-ke uma ungenalo ulwazi oluningi, ekuqaleni kuzodingeka uhlalele eminye imisebenzi engakhokhi kahle bese uyakhuphuka futhi ngaphezu kwakho konke uzazise ukuze ukwazi uthole amanani angcono.
Omunye wemisebenzi okhula ngokuya ezindebeni zabaningi owomsizi obonakalayo. Kuluhlobo lukanobhala, noma unobhala lapho, esikhundleni sokuthi abe se-situ ehhovisi, okwenziwayo ukuthi usebenza ekhaya. Futhi hhayi lokho kuphela, ungathatha izinkampani eziningana (noma abantu) ngasikhathi sinye, ngoba uma uhlela lokho bekungeke kube yinkinga).
Kulokhu, unesimiso esivumelana nezimo (ngoba ungayenza ihambisane ukuze amaklayenti angadluli, enze izingcingo eziphuthumayo, ama-aphoyintimenti, njll.) futhi ungakhokhisa inani / ihora olifunayo (njalo uxoxisana neklayenti lakho, kunjalo).
Mayelana nokuthi uzosebenzaphi, ungabheka amabhodi emisebenzi, izinkundla zokuxhumana, izingosi zokuxhumana ezifana ne-Linkedin ... Khumbula ukuthi lokhu kuyadlondlobala njengamanje, nokuthi, yize kukhona abantu abaningi, uma ukwazi ukuthengisa, ungathola umsebenzi kulokhu.
Kulokhu, ukuze uthole imali ekhaya njengomxhumanisi, kufanele ube nolwazi oluhle ngalezo zifundo. Isibonelo, uma ufundele ezokuvakasha, ungasiza izinkampani zezokuvakasha, kepha hhayi izinkampani zezingane, ngokwesibonelo. Kepha Uma ufunde ukuphathwa kwebhizinisi nokuphathwa, le yindlela yokusiza usekhaya (nangentengo ephansi kuneyenyama). Ngaphezu kwalokho, ungaba namakhasimende amaningana nokuthi kungaba yini ukweluleka izinkampani noma ochwepheshe (ama-freelancers, izinkampani, imiphakathi, njll.) Kwezobuchwepheshe. Ungasebenza ngokukhethekile ekuxazululeni izinkinga zebhizinisi, ezobuchwepheshe noma zenhlangano.
Thengisa izifundo noma ube nomthelela
Ngokufana nalokhu okungenhla, ukuba ngumxhumanisi, enye indlela yokwenza imali ekhaya ukuthengisa izifundo zakho, kungaba kwividiyo noma ephepheni. Imayelana nokuthi bhala i-ajenda, noma ulandise bese uyichaza ngevidiyo, bese uyayikhokhisa. Kunabantu abaningi, ngentengo encane, abangaba nentshisekelo kuyo, futhi uma ukwenza ngezihloko ozithandayo, impela lokho okuqukethwe kuzoba yigciwane.
Futhi uma ukhuluma ngokuphila okuhle, enye inketho ukuthi ube yithonya lalokho okuqukethwe. Ungakha isiteshi ku-Youtube, Twitch, Instagram, njll. futhi wenze amavidiyo achaza izinkinga noma izingqinamba ozibona zithandwa umphakathi.
Khumbula ukuthi zombili izinketho zingaxhunyaniswa kalula.
Uyenza kanjani imali ekhaya: Isitolo sakho esiku-inthanethi
Ukuba nesitolo esiku-inthanethi akusho ukuthi kufanele uthengise imikhiqizo yabanye abantu, nayo ingaba ngeyakho, ngoba ungazenzela imikhiqizo eyenziwe uyidayise. Isibonelo, cabanga ukuthi uyakwazi ukwenza insipho; Ongakwenza ukudala iwebhusayithi lapho ungathengisa izinhlobo ezahlukahlukene zensipho bese ulandela isu lokumaketha ukufinyelela amakhasimende.
Enye indlela ukwenza ukudla okwenziwe ekhaya, ungacabanga ukuthi bangaki abantu abangakucela ukudla okwenziwe ekhaya? Impela ukuqala ngezingane zakho.
Uma ukwazi ukuthwebula izithombe, phakathi kwezinketho zendlela yokwenza imali ekhaya yilokhu, ukuthatha izithombe nokuzithengisa emabhange ezithombe. Ngaso sonke isikhathi uma umuntu esebenzisa isithombe sakho uzokwenza inzuzo ngaso, esizokusiza ngoba ngeke uze udinge nokuphuma uyothengisa, abanye bayakwenzela.
Sincoma lokho izithombe ezilandela izitayela zamanje, futhi ezokuqala nezobuciko; ngale ndlela uzoba namathuba amaningi okugqama emncintiswaneni.
Uyenza kanjani imali ekhaya: Uthisha obonakalayo
Ubuchwepheshe obusha, kanye neqiniso lokuthi abaningi bavalelwe, kuvumele umuntu omusha ukuba azalwe ekuqeqesheni nasemfundweni: uthisha obonakalayo. Akuyona into entsha ngempela, ngoba yayivele ikhona, kepha yinto ekhuthazwayo, hhayi izifundo zabantu abadala kuphela, kepha nentsha kanye nezingane.
Izihloko zihluke kakhulu, ungathola nemfundo yokuzivocavoca umzimba, umqeqeshi womuntu siqu, njll.
Imibono yokuthi ungayenza kanjani imali ekhaya miningi, kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi ukhethe okukodwa noma ngaphezulu ozizwa ukhululekile ukusebenza ngakho. Khumbula ukuthi ungaba nesikhathi esanele sokuzithuthukisa; Noma ukuthi unokuncane kuphela, ngakho-ke uma kuyinto oyithandayo noyazi kahle, kuzoba lula kakhulu ukunikela leso sikhathi sokutshala imali.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Ungayithola kanjani imali ekhaya
Imibono emisha yebhizinisi